Hotjar: Khariidadaha kulkulul, Jidadka, Duubista, Falanqaynta iyo Jawaab celinta | Martech Zone
Hotjar waxay bixisaa qalab dhameystiran oo loogu talagalay cabbiraadda, duubista, kormeerka iyo ururinta ra'yi-celinta iyadoo loo marayo websaydhkaaga hal xirmo oo la awoodi karo. Way ka duwan tahay xalalka kale, Hotjar waxay bixisaa qorshayaal leh qorshooyin fudud oo la awoodi karo halkaas oo ay ururadu ku soo saari karaan aragti ku saabsan an tiro aan xadidnayn oo bogag internet ah - oo u diyaari kuwaan tiro aan xadidnayn oo isticmaaleyaal ah.
Imtixaanada Hotjar Analytics ayaa lagu daray
Heatmaps - Bixinta matalaad muuqaal ah oo ku saabsan qasabadaha isticmaaleyaashaada, qasabadaha iyo dhaqanka wareejinta.
Duubista Booqdaha - ku duub hab-dhaqanka booqdaha bartaada. Markaad aragto qasabadaha booqdahaaga, qasabadaha, dhaqdhaqaaqa jiirka waxaad ku aqoonsan kartaa arrimaha ku saabsan isticmaalka on y.
Meelaha loo beddelayo - cadee bogga iyo talaabada ugu badan ee soo booqdayaashu ay ka tagayaan la shaqeynta magacaaga.
Foomka Falanqaynta - Ku hagaaji heerarka dhammaystirka foomka khadka tooska ah adigoo ogaanaya meelaha ay waqti dheer ku qaadanayso ﬁll, kuwaas oo bannaan, iyo sababta ay martidaadu uga tagayaan foomkaaga iyo boggaaga.
Codbixinta Jawaab celinta - Ku hagaaji qibrada websaydhkaaga adoo weydiinaya martida waxa ay doonayaan iyo waxa ka hortaagan inay gaaraan. Bartilmaameedka su'aalaha booqdayaasha gaarka ah meelkasta oo ka mid ah websaydhkaaga iyo moobiilkaaga.
Sahamis - Dhiso baaritaanno adiga kuu gaar ah adigoo adeegsanaya tifaftire sahlan. Ka soo ururi jawaabaha waqtiga dhabta ah qalab kasta. U qaybi sahamintaada adoo adeegsanaya xiriiriyeyaasha websaydhka, emayllada ama ku martiqaad martidaada wax yar uun ka hor intaysan ka tegin bartaada si ay u kashifaan diidmadooda ama walaacooda
Qortaan Tijaabiyeyaasha Isticmaalayaasha - Kaqeybgal kaqeybgalayaasha cilmi-baarista isticmaalaha iyo tijaabinta tooska ah ee bartaada. Ururi macluumaadka muuqaalka, faahfaahinta xiriirka oo ku bixi hadiyad beddelkeeda caawimaaddooda.
Saxiix u noqo Maxkamad Hotjar Bilaash ah
Hotjar waxay kugula talineysaa nidaamkan 9-tallaabo ah hagaajinta khibradaada macaamiisha iyo beddelaadyada.
Samee a Heatmap taraafikada sare iyo bogagga soo degitaanka sare.
Baro 'Wadayaasha' leh Codbixinta Jawaab celinta bogagga sare ee ka degitaanka taraafikada.
Survey isticmaaleyaashaada / macaamiishaada jira emayl ahaan.
Samee a Funnel si loo ogaado Caqabadaha ugu waaweyn ee bartaada.
Samee Codbixinta Jawaab celinta bogagga Barrier.
Samee Heatmaps bogagga Barrier.
Isticmaal Soo-celinta booqdaha si dib loogu ciyaaro kalfadhiyada ay booqdayaashu ka baxayaan bogagga Xayndaabka.
Qoro Tijaabiyaha Isticmaalaha si loo muujiyo Darawalada loona ilaaliyo Caqabadaha.
Muuji 'Hooks' oo leh a Ra'yi-uruurinta Jawaabta bogaggaaga guusha.
Tags: falanqaynta masaf beddelaadfunnels beddelaadkhariidadakhariidayntakhariidadahahotjarduubista isticmaalahaduubista booqdahaqalabka sahanka booqdahasahaminta booqdaha